ထရမ့်ကို ဝေဖန်သူတွေ နေအိမ် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်း အပို့ခံရ နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
ထရမ့်ကို ဝေဖန်သူတွေ နေအိမ် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်း အပို့ခံရ နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ 4.5
၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - ဘီဘီစီမြန်မာတီဗီ
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ရှင်ကျန်း ဒေသမှာ ၀ိဂါ မွတ်ဆလင် တသန်းကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မိကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရဆို၊
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘားရက် အိုဘားမား၊ ဟီလာရင် ကလင်တန်နဲ့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သူ တချို့အိမ်ကို ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းလို့ သံသယဖြစ်ဖွယ် ပုံစံတူ အထုပ်တွေ ရောက်ရှိ၊
အီသီယိုပီးမှာ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်၊
နှစ်ပေါင်း ၂၄၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး ဂရိ ကုန်သွယ် သင်္ဘောတစီးကို သုတေသီတွေ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းတွေကို ရှုစားရဖို့ ရှိပါတယ်။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #အမေရိကန် #အိုဘားမား #ဒေါ်နယ်ထရမ့် #ဟီလာရင်
မွတ်ဆလင်တွေ နှိုပ်စက် သတ်ဖြတ်တာတွေ တင်ပေးပါအုန်း ဘီဘီစီ ကျေးဇူးပါ
Author — myo win
Author — Thein Soe
တရုတ်​ကို ဒီတခါ​တော့ အရမ်း​လေးစားတွားပီ ဗျာ အား​ပေးတရ်​ ​ထောက်​ခံတရ်​
Author — Mt Phone
BBCကဝန်ထမ်းတွေ မွတ်ဆင်လင် ဖင်လိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရရှိ
Author — Ven Succit Ta
တရုတ်က ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်လဲ သိလား မူဆလင်တွေရဲ့ သူတို့ယုံကြည်တာက သူတို့ဘာသာတာအကောင်းဆုံး လို့ပြော မယုံကြည်တဲ့သူတွေကို သူတို့လူမျိုးသုန်းသတ်ဖြတ် သူတို့လုပ်ရပ်နဲ့သူတို့ကို တန်ပြန် လုပ်တာ အဲဒီတော့သူတို့က မတရားအရင်လုပ်ပြီး
Author — A Hto
ကျမသာ တရုတ်အစိုးရအာဏာရတစ်ယောက်ထဲက ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော အဆပေါင်း
BBC လဲ ဖာသေမ ပါးစမ်းလို..
ငါလီး ရိုဟင်ဂျာ ရလီမယ်....
ရခိုင် ကိုယ်ပိုင် မရှိစေရဘူး.
BBC. တရက် တရက် လာရင်
မူဆလင် သတင်း မပါရင်
ထမင်း စားမဝင်ဘူး ထင်တယ်
ခွေးမွတ်တွေကို သနားနေရင် bbcရေခေါ်ထားလိုက်လေ
Author — lat tun
ဒီလောက် တာတောင် မသင့်တော်သေဘူး အကြပ်ကိုင်ထားမှ တော်ရုံပဲရှိမယ်
Author — Crazy Bike
Myanmar need to love Myanmar too I am Real Myanmar Good Lady 😂 hahaI love Muslim I love Myanmar I love all human are is true
Author — Susie Chiesa
BBCက ထက်အောင် ဆိုတဲ့ခွေးတတောင်းစား
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး ရိုဟင်ဂျာတွေက နင့်အမေလင်တွေ စောက်ခွက်ကိုက သေးနဲ့ပန်းချင်စရာ ပိတ်ဆံရရင်
နင့်အမေကိုတောင် ဖာသည်မ လုပ်ခိုင်းမဲ့ စောက်ခွက်
Author — Aye Aye Thein
Mone nai tong mone htaa kuak.
M Tay khin ta wa mone htaa laik.
Da hma buddah wa dak damma minggala.
BBC ဘက်တော် သားများ ကားတိုက်သေဆုံးသည်ဟု သတင်းရရှိ
Author — Zeyar Myanmar
ကုလား အကြောင်​ဆိုရင်​ မင်းတို့ ဖင့်​ထဲ လီး ဝင်​နေတာနဲတူတယ်​ မဆိုင်​တဲ့ သူကိုတွေကို စိတ်​နဲ့ တောင်​ မငြိုညင်​ပါ
Author — SCOR PIONS
Author — Aung Myo
စနေနေ့ ဇူလိုင် ၄ ၂၀၂၀ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း
တရုတျလုံခွုံရေး ဥပဒသေဈနဲ့ ဟောငျကောငျဆန်ဒပွသူတှေ စတငျဖမျးဆီးခံရ - BBC News မွနျမာ
မြန်မာ့စပါးအုံးကို လာစိန်ခေါ်တဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာက ချန်ပီယံ
လတဘက်ခြမ်းကို ဆင်းခဲ့တဲ့ တရုတ်အာကာသယာဉ် နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ
အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ နည်းပညာစစ်မြေပြင်
အရှုံးမရှိသေးတဲ့ ပြိုင်ဖက်ကို အလဲထိုးဖို့ အောင်လ ဘာတွေ ပြင်ထားလဲ
သမ္မတထရမ့် ပြိုင်ဘက်ကို အလဲထိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရ - BBC News မြန်မာ